ကျွန်မ အရင်တုန်းကလို စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ဒီတစ်ခါ တကယ်ကို စိတ်ကုန်ုသွားပါ – Shinyoon
ကျွန်မ အရင်တုန်းကလို စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ဒီတစ်ခါ တကယ်ကို စိတ်ကုန်ုသွားပါ
ကျွန်မ စိတ်ကုန်သွားတာပါ ။
ကျွန်မ အရင်တုန်းကလို စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ဒီတစ်ခါ တကယ်ကို စိတ်ကုန်ုသွားပါ ။ စိတ်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်သလိုမျိုး ခဏတဖြုတ်လေးနဲ့ ပြေမှာပါလို့မထင်စေဘူး ။ ပြီးတော့ လုံးဝလဲ မတူဘူးနော် ။
စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကို လုပ်မိတဲ့အခါ ခဏတာ မကြည်ဖြူတာပါ ။ အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ရှင်းပြတဲ့အခါ ပြန်ပြီး ကြည်ဖြူပေးလိုက်လို့ရတဲ့အရာမျိုးပေါ့ ။ စိတ်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ . . .ဘာဆိုဘာမှ ဆက်ပြီး ပြောချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး ။ ဘာရှင်းပြချက်ကိုမှလဲ နားထောင်ချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး ဖြစ်နိုင်ရင် အသံတောင် မကြားချင်တော့တာမျိုးပေါ့ ။
ကျွန်မ . . .နားလည်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် … တစ်နေ့ကျရင်တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကျွန်မ နားလည်ပေးခဲ့ဖူးတယ် ။ အမှားတွေရှိလာတဲ့အခါတောင် သူလဲ လူပဲလေ တစ်ခါတစ်ရံတော့ မှားတတ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ခွင့်လဲ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် အမှားတစ်ခုကို မှားမှန်းသိသိနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ပြီးလုပ်နေတာမျိုးတော့ ခွင့်လွှတ်ဖို့မသင့်တော့ဘူး မဟုတ်လား
ဝန်ခံပါတယ် ကျွန်မ သူမှသူ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ သူက ဂရုမစိုက်ပေမယ့် တစ်နေ့ မေတ္တာတွေမှန်ရင် တန်ပြန်တော့ လာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ဂရုတစိုက်ရှိနေပေးခဲ့ဖူးတယ် အရိပ်တကြည့်ကြည့်လေးနဲ့ စိတ်ပူပေးခဲ့တယ်ဆိုရင် ပိုပြီးမှန်မယ်ထင်ပါတယ် ။ ကျွန်မလဲ လူတစ်ယောက်ပါ . . . ကိုယ်အလေးထားသလောက် ပြန်ပြီး ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနားမှာ တန်ဖိုးမဲ့နေသလို ပုံစံမျိုးနဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာရပ်နေနိုင်မှာလဲ ။
နောက်ဆုံး ကျွန်မ . . .လက်ခံလိုက်တာပါ . . .သူ ကျွန်မကို မချစ်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံလိုက်တာပါ ။ ငါဘာလုပ်လုပ်ရပါတယ် ငါတောင်းပန်လိုက်ရင် ပြန်ပြီး ခွင့်လွှတ်မှာပဲ ဆိုတဲ့အတွေး တွေ သူ တွေးနေပြီးဆိုတာ တဖြေးဖြေး ရိပ်မိလာခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်မ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆက်ပြီး မကြိုးစားတော့ပါ ။ ကျွန်မ ဒီဆက်ဆံရေးကြီးကို စိတ်ကုန်နေပါပြီ . . .ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက် မရှိ အပြန်အလှန်မရှိပါပဲ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ ချစ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်ကပဲ ဆွဲထားရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မ တကယ် စိတ်ကုန်နေပါပြီ
ကျွန်မ စိတ်ဆိုးနေတာမဟုတ်တော့ဘူး ကိုယ်မကြိုက်သိသိနဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ပြီး မတည်တဲ့ကတိတွေ ပေးတတ်တာကို စိတ်ကုန်လာတာ ။ ကျွန်မ စိတ်ကောက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူး လူပိုလိုရပ်နေရတဲ့အဖြစ်ကို တဖြေးဖြေး စိတ်ကုန်လာတာပါ ။ အရင်ကလို ပြန်ပြီး ချော့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ မရှိတော့ဘူး ။ အကြောင်းပြချက်တွေကို နားထောင်ချင်တဲ့စိတ်လဲ မရှိတော့ဘူး ။ ဒီတစ်ခါ ကျွန်မ တကယ် စိတ်ကုန်သွားတာပါ ။
ကြၽန္မ စိတ္ကုန္သြားတာပါ ။
ကြၽန္မ အရင္တုန္းကလို စိတ္ဆိုး စိတ္ေကာက္ေနတယ္လို႔မထင္ပါနဲ႔ ဒီတစ္ခါ တကယ္ကို စိတ္ကုႏ္ုသြားပါ ။ စိတ္ကုန္သြားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္သလိုမ်ိဳး ခဏတျဖဳတ္ေလးနဲ႔ ေျပမွာပါလို႔မထင္ေစဘူး ။ ၿပီးေတာ့ လုံး၀လဲ မတူဘူးေနာ္ ။
စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့အရာတစ္ခုကို လုပ္မိတဲ့အခါ ခဏတာ မၾကည္ျဖဴတာပါ ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လုံလုံနဲ႔ ရွင္းျပတဲ့အခါ ျပန္ၿပီး ၾကည္ျဖဴေပးလိုက္လို႔ရတဲ့အရာမ်ိဳးေပါ့ ။ စိတ္ကုန္သြားတယ္ဆိုတာကေတာ့ . . .ဘာဆိုဘာမွ ဆက္ၿပီး ေျပာခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ဘူး ။ ဘာရွင္းျပခ်က္ကိုမွလဲ နားေထာင္ခ်င္စိတ္ မရွိေတာ့ဘူး ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အသံေတာင္ မၾကားခ်င္ေတာ့တာမ်ိဳးေပါ့ ။
ကြၽန္မ . . .နားလည္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္ … တစ္ေန႔က်ရင္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမွာပါဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ကြၽန္မ နားလည္ေပးခဲ့ဖူးတယ္ ။ အမွားေတြရွိလာတဲ့အခါေတာင္ သူလဲ လူပဲေလ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ မွားတတ္မွာေပါ့ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ခြင့္လဲ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ဖူးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အမွားတစ္ခုကို မွားမွန္းသိသိနဲ႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္ၿပီးလုပ္ေနတာမ်ိဳးေတာ့ ခြင့္လႊတ္ဖို႔မသင့္ေတာ့ဘူး မဟုတ္လား
၀န္ခံပါတယ္ ကြၽန္မ သူမွသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္ ။ သူက ဂ႐ုမစိုက္ေပမယ့္ တစ္ေန႔ ေမတၱာေတြမွန္ရင္ တန္ျပန္ေတာ့ လာမွာပါဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ကိုယ့္ဘက္က ဂ႐ုတစိုက္ရွိေနေပးခဲ့ဖူးတယ္ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ေလးနဲ႔ စိတ္ပူေပးခဲ့တယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးမွန္မယ္ထင္ပါတယ္ ။ ကြၽန္မလဲ လူတစ္ေယာက္ပါ . . . ကိုယ္အေလးထားသေလာက္ ျပန္ၿပီး ဂ႐ုမစိုက္တတ္တဲ့လူတစ္ေယာက္အနားမွာ တန္ဖိုးမဲ့ေနသလို ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာရပ္ေနႏိုင္မွာလဲ ။
ေနာက္ဆုံး ကြၽန္မ . . .လက္ခံလိုက္တာပါ . . .သူ ကြၽန္မကို မခ်စ္ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အခ်က္ကို လက္ခံလိုက္တာပါ ။ ငါဘာလုပ္လုပ္ရပါတယ္ ငါေတာင္းပန္လိုက္ရင္ ျပန္ၿပီး ခြင့္လႊတ္မွာပဲ ဆိုတဲ့အေတြး ေတြ သူ ေတြးေနၿပီးဆိုတာ တေျဖးေျဖး ရိပ္မိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြၽန္မ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ဆက္ၿပီး မႀကိဳးစားေတာ့ပါ ။ ကြၽန္မ ဒီဆက္ဆံေရးႀကီးကို စိတ္ကုန္ေနပါၿပီ . . .ကိုယ့္ဘက္သူ႔ဘက္ မရွိ အျပန္အလွန္မရွိပါပဲ ကိုယ့္ဘက္ကပဲ ခ်စ္ၿပီး ကိုယ့္ဘက္ကပဲ ဆြဲထားရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကို ကြၽန္မ တကယ္ စိတ္ကုန္ေနပါၿပီ
ကြၽန္မ စိတ္ဆိုးေနတာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ကိုယ္မႀကိဳက္သိသိနဲ႔ ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ၿပီး မတည္တဲ့ကတိေတြ ေပးတတ္တာကို စိတ္ကုန္လာတာ ။ ကြၽန္မ စိတ္ေကာက္ေနတာမဟုတ္ေတာ့ဘူး လူပိုလိုရပ္ေနရတဲ့အျဖစ္ကို တေျဖးေျဖး စိတ္ကုန္လာတာပါ ။ အရင္ကလို ျပန္ၿပီး ေခ်ာ့ရင္ေကာင္းမယ္ဆိုတဲ့အေတြးေတြ မရွိေတာ့ဘူး ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို နားေထာင္ခ်င္တဲ့စိတ္လဲ မရွိေတာ့ဘူး ။ ဒီတစ္ခါ ကြၽန္မ တကယ္ စိတ္ကုန္သြားတာပါ ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပွစိပွစိပြောနေသေးတာ သူ့စိတ်ထဲ ရှိနေသေးလို့ပါ